တစ်ဦးကကေမန်ကျွန်းများဘဏ်အကောင့်, တရားစွဲမှုထံမှပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန်ဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်, နိမ့်အခွန်နိုင်ပါတယ်။ သင်လျော်သောဥပဒေရေးရာ tools များအတွက်အကောင့်ကိုင်တဲ့အခါဒီအထူးသဖြင့်အမှုဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်သည်ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ငါးရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျး, က 80 ကမ္ဘာ့ရှေ့နေများ၏% နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစွဲမှုတစ်ခုအံ့သြ 96% ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်တရားရုံးများကိုတိုက်ရိုက်လူတွေကိုအမေရိကန်ဘဏ်များအတွက်ကိုင်ကြောင်းရန်ပုံငွေများကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင့်ရေးရာထဲကနှာခေါင်းကြီးသောအိမ်နီးချင်းများစောင့်ရှောက်ဖို့ privacy ကိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်များပါဝင်သည်။
သင်၌ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါ ကေမန်ကျွန်းစုကမ်းလွန်ဘဏ် သင်သည်သင်၏ရပ်ကွက်အတွင်းရှေ့နေများ၏လက်လှမ်းမမီကျော်လွန်သင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေရွေ့လျားအတွက်တဦးတည်းခြေလှမ်းယူပြီးနေကြသည်။ တစ်ဦးတည်းကြောင်း, သို့သော်မလုံလောကျပါပဲ။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ဒေသခံတစ်ဦးတရားသူကြီးကရန်ပုံငွေများပြန်လာရန်သင့်အားပညတ်တော်မူ၏လျှင်, သူတို့သည်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင်သည်အတင်းအကျပ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာ tool ကို၏အတွင်းပိုင်းဘဏ်အကောင့်တည်ထောင်ရန်လည်းလိုအပ်ပေသည်။
ဥပမာအနေနဲ့ကမ်းလွန် LLC နှင့် / သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုပါဝင်သည်။ တရားရုံးရန်ပုံငွေများကိုပြန်သွားဖို့သငျသညျအမိန့်ရသောအခါဘာဖြစ်မည်နည်း သင်၌ step နှငျ့သငျကာကှယျပေးနိုငျသူတစ်ဦးကနိုင်ငံခြားဂေါပကရှိသည်။ သည်, ထိုဂေါပကထွက်သယ်ဆောင်ခံရမှအမိန့်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သင်သည်ရေနွေးထဲကစောင့်ရှောက်လော့။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ဂေါပကသင့်ဒေသခံတရားရုံးများ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ဒေသခံတရားရုံးသင့်ရဲ့ခရိုင်, ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံအတွက်လုပ်အမိန့်ကိုလိုက်နာစေခြင်းငှါမလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာဒီအပေါ်ကိုပိုမို။ ပထမဦးစွာဖွင့်တိုင်းပြည်ကိုယ်နှိုက်၏အနည်းငယ်နောက်ခံကိုကြည့်ကြကုန်အံ့။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများကျူးဘားနှင့်ဗဟိုအမေရိကတိုက်အကြားတည်ရှိသည်။ ဒါဟာအဆင်သင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတင်းကိုအပိုင်သုံးခုကျွန်းများတစ်ဦးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်များ Directory ကိုကျော် 55 တထောင်မှာသူတို့ရဲ့ခြုံငုံလူဦးရေကိုထည့်လေ့မရှိ။ အဆိုပါကေမန်ဒေါ်လာစျေး (KYD) သည်လက်ရှိတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒေါ်လာစျေး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဖြင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းမှာရှိပါတယ်။ နှုန်း 1.00 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖို့ 1.20 KYD ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများမဝင်ငွေအခွန်ရှိပါတယ်။
တိုင်းပြည်သို့ကြွလာသောငွေအများစုဟာခရီးသွားလုပ်ငန်း, အကောက်ခွန်ငွေပေးချေမှု, တံဆိပ်ခေါင်းတာဝန်များကိုနှင့်နှစ်စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခကြေးငွေကနေလာပါတယ်။ အဆိုပါ Cayman အားကြီးသောနိုင်ငံရေးအခြေအနေရှိသည်နှင့်အဓိကများထဲမှစဉ်းစားနေကြတယ် ကမ်းလွန်ဘဏ် ကမ်ဘာပျေါတှငျစင်တာများ။ ဒါဟာနီးပါး 250 အသိအမှတ်ပြုဘဏ်တွေရှိပါတယ်။ ဘဏ်တွေအတွက်သိုက် 1,600 ထရီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာကျော်တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်။
သောကောင်းသောအကြောင်းပြချက်အများကြီးရှိပါတယ် ကေမန်ကျွန်းများဘဏ်များ ဒါကြောင့်လူကြိုက်များကြသည်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုကသူတို့တစ်တွေယုံကြည်စိတ်ချရသည့်နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Appleby အားကြီးသောဂုဏ်သတင်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလယ်ပိုင်းအချိန်တည်နေရာ, နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်းအတိုင်းဤအကြောင်းပြချက်အချို့ကိုးကား။ အဆိုပါကျွန်းများအင်္ဂလိပ်ဘုံပညတ်တရား၏လက်မှသူတို့ရဲ့အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုအဆင်ပြေအောင်ခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ကအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ပါပြီ။
ကမ်းလွန်န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကျွမ်းကျင်သူများကိုသိသကဲ့သို့, ကေမန်တရားရုံးစနစ်ကတစ်ဦးကာလကြာရှည်, တည်ငြိမ် caslaw repository ကိုရှိပါတယ်။ Plus အား, အ ကေမန်ကျွန်းစုကမ်းလွန်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍခေတ်သစ်တောင်းဆိုချက်များကို၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ကပြွီးတစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုခြိနျးတှေ့မှတက်သည်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အခြေအနေကဆိုထားသည်အဖြစ်အပြောင်းအလဲများကိုအောင်မှကျူးလွန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအစစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (OECD ၏) နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် Anti-ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်မကြာခဏနိုင်ငံတကာကဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါသောထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ RJ Mintz ၏ဥပဒေရုံးကပြောပါတယ် ကေမန်ကျွန်းများဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက် ကမ်ဘာပျေါမှာအဲ့ဒီ့ကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Cayman အတွက်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများအလွန်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။ ကဲ့သို့သောသူတို့၏အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူတစ်ဦးအကြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အဆငျ့, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် privacy ကိုပေး။ တဦးတည်းစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုအနည်းဆုံးငွေပမာဏနှင့်အတူကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်တစ်ဦးယုံကြည်မှုသို့မဟုတ်အခြားပုဂ္ဂလိကကျင်းပမော်တော်ယာဉ်အတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းဆန်ခါတင်အရာရှိများရှိသည်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကေမန်ကျွန်းစုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ, Appleby သူတို့ကအကောင့်မှလက်ခံရရှိကြီးစွာသောအကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှအခွန်ကြားနေရေးကြောင်းကိုကိုးကားရန်ပေါ်တတ်၏။ အဆိုပါ Cayman လုံးဝအခွန်အခမဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်အခွန်ဆိပ်မရှိကြပေ။ သို့သော်သူတို့ဝင်ငွေ, အမြတ်အစွန်း, ကော်ပိုရေးရှင်း, သို့မဟုတ်အခွန်ရှောင်အပေါ်မြို့တော်အကျိုးအမြတ်သို့မဟုတ်အခွန်မရှိကြပါဘူး။ သင့်ရဲ့ပု Cayman အတွင်းကုမ္ပဏီထည့်သွင်းသည့်အခါ, သင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီကိုအစိုးရကနေသိသိသာသာအခွန်အကျိုးအတွက်ရရှိသွားတဲ့။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခု 20 နှစ်ကာလအတွက်အခွန်လွတ်ရှိနေပါဦးမည်။ ကင်းလွတ်ခွင့်ရကိုး စား. သို့မဟုတ်ကန့်သတ်မိတ်ဖက်အတူတူပင်ကြေညာချက်ခံယူပေမယ့်တစ်ဦး 50 နှစ်ကာလအထိအဘို့အနိုင်ပါတယ်။
အထဲကရှာတွေ့ခြင်းမပြုမီ အဆိုပါကေမန်ကျွန်းစုများတွင်မည်မျှဘဏ်များဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ဘဏ်တွေနှစ်ခုအတန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေး အင်ဆီကျွတ် တစ်ဦးက "" ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး 'ခ' လိုင်စင်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်မှတ်သားအဲဒီနှစ်ခုဘဏ်အမျိုးအစားများကိုဖော်ပြထားတယ်။ အစိုးရကထားတဲ့ "တစ်ဦးက" လိုင်စင်တစ်ခုခြေစစ်ပွဲနျဌာနခှဲသို့မဟုတ်အဓိကကနိုင်ငံတကာဘဏ်များ၏အဓိကလက်အောက်ခံကြောင်းတစ်ခုလျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်ပေးထားတယ်။ ဒါဟာမနည်းထက် $ 50 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဦးအသားတင်ရကျိုးနပ်ရှိရမည်။ ဤသည်လိုင်စင်ဘဏ်နှစ်ခုလုံးကိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်မှန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်နှင့်တားမြစ်ခြင်းမရှိသောကမ်းလွန်ကန့်သတ်: အဆိုပါစည်းမျဉ်းနှစ်ခုအမျိုးအစားခွဲများသို့ 'ခ' လိုင်စင်ဘဏ်များကိုချိုးဖျက်။ တစ်ဦးကကမ်းလွန်ကန့်သတ် "B ကလိုင်စင်" ဘဏ်သာအမည်ရှိသော Non-နေထိုင်သူ, ကမ်းလွန် client များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီလိုင်စင်တစ်ဦးကကိုင်ဆောင်သူအခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်နိုင်ငံရပ်ခြားကော်ပိုရိတ်အုပ်စုတွင်တစ်ဦးကြီးကြပ်ဘဏ်လုပ်ငန်း entity ရှိသည်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ တစ်ခုကအတားအဆီးမဲ့ကမ်းလွန် "B ကလိုင်စင်" သို့သော် Cayman အတွင်း မှလွဲ. , အကေမန်ကျွန်းစု၏ Non-နေထိုင်သူများဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိသောဘဏ်လုပ်ငန်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့အာဏာပိုင်အဆိုအရ 11 ဘဏ်များ 2016 ၏စတုတ္ထသုံးလပတ်၏အဖြစ် "တစ်ဦးက" လိုင်စင်နှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ အလားတူလေးပုံတစ်ပုံ 148 'ခ' လိုင်စင်ဘဏ်များပြသထားတယ်။ ဒီကနေ ကေမန်ကျွန်းဘဏ်များစာရင်းကျနော်တို့လူသိအများဆုံးဘဏ်များ၏နှစ်ခုဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။ တဦးတည်းကနေဒါအခြေစိုက်သည်နှင့်တ Cayman အတွက်အခြေခံသည်။ ဤအဘဏ်များနှစ်ယောက်စလုံးက Grand ကေမန်ကျွန်းပေါ်ရှိနိုင်ငံ၏မြို့တော်, ဂျော့ခ်ျမြို့မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်ရုံးခန်း, ရှိသည်။ အဆိုပါ HSBC ကကေမန်ကျွန်းစုအဆိုပါ Cayman အတွက်ယခင်ဘဏ္ဍာရေးပါဝါ, စစ်ဆင်ရေးအတွင်းမရှိတော့ပါ။
အဆိုပါ ကနေဒါ၏တော်ဝင်ဘဏ် in ဂျော့ခ်ျမြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်း, နာမတော်ဖြင့်အဓိပ်ပာအဖြစ်ဖြစ်ပါသည်ကနေဒါအစပြုတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်၏ဌာနခွဲဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပြဿနာကြောင့် အဆိုပါကေမန်ကျွန်းစုမှာနေထိုင်ကြဘူးသူကလူများအတွက်ကေမန်နျဌာနခှဲလိမ့်မည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပွင့်လင်းမရဘဏ်အကောင့်။ ပိုများသောဤသို့တိုကျရိုကျ, အကေမန်နျဌာနခှဲအမေရိကန်အခြေစိုက်လူတို့အဘို့ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်မည်မဟုတ်။ သူတို့ရဲ့ website သို့အရ, RBC 35 နိုင်ငံများရှိစစ်ဆင်ရေးရှိပါတယ်။ ဒါဟာထက်ပို 16 သန်း clients များဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဆိုပါစာရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 100: ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်အများစုမှာရေရှည်တည်တံ့ Corporation က၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်မှုများအတွက်ဘဏ်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
ကော်ပိုရိတ် Knights ဒီနှစ်ပတ်လည်စာရင်းကိုနှစ်စဉ်ပြုစု။ ဒါဟာကမ္ဘာကြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ခေါင်းဆောင်များ, လူမှုရေး, နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြစ်ရပြီကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ကေမန်ကျွန်းများဘဏ်လုပ်ငန်းအတိုးနှုန်း ဘဏ်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားပေမယ့် RBC options အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သိုက်၏သူတို့ရဲ့လက်မှတ်များ5နှစ်ကာလတစ်ခုနေ့ချင်းညချင်းယုံကြည်မှုကနေခြားနားသည်။ သူတို့အချိန်ကျော်ကွဲပြားအဖြစ်ကျနော်တို့ဒီမှာအတိုးနှုန်းကိုးကားမည်မဟုတ်။
အတော်များများက RBC အဆိုပါ Cayman တှငျနထေိုငျသူမြားအဘို့အထိပ်ဘဏ္ဍာရေးရွေးချယ်မှုတစ်ဦးအဖြစ်ခံစားရတယ်။ RBC စည်းစိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, ချုပ်နှောင်ထား, အရစ်ကျ, ပုဂ္ဂလိကဘဏ်လုပ်ငန်း, ရန်ပုံငွေအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုကိုန်ဆောင်မှုအတွက်အထူးပြုသည်။
သင် Cayman အခြေစိုက်ကြောင်းဘဏ်ချင်လျှင်, သင် options များရှိသည်။ အဆိုပါတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းနေထိုင်ကြဘူးသူကလူများအတွက်အကောင့်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုဘဏ်များရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းကော်ပိုရိတ်, လက်လီနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဘဏ်လုပ်ငန်းပူဇော်ကြောင်းရရှိနိုင်ပါသည်ဘဏ်များရှိသည်။ တစ်ဦးကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုအကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းဘဏ်များရန်ပုံငွေအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့လည်းရှိပါတယ်။ ဤအဘဏ်တွေကနိုင်ငံခြားမိဘကုမ္ပဏီများသည်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကတည်းကသူတို့ငွေထုတ်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ Plus အားသူတို့ဖောက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတွေ့ပေးအရွယ်အစားလောက်အောင်သေးငယ်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦး fixed သိုက်အဘို့မိမိတို့အကောင့်ပေါ်အတိုးနှုန်းငွေကြေးနှင့်ကြာချိန်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ ဥပမာအားဖြင့်ဘဏ်တွေအပြိုင်အဆိုင်အတိုးနှုန်းနှင့်အတူ $ 250,000 မှ $ 499,000 ထံမှအမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက် fixed သိုက်ကိုဆက်ကပ်။ ဤရွေ့ကား CD များကဤအရေးအသား၏အဖြစ်7ရက်ပေါင်းနှင့်3နှစ်အကြား Duration ရှိသည်။ အတိုးနှုန်းအချိန်ကျော်သညျအလှနျအတက်အကျကတည်းကသဘာဝ, သငျသညျအထဲကရောက်ရှိရန်နှင့်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်အရေအတွက်ကိုသို့မဟုတ်ပုံစံကို အသုံးပြု. တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
ကေမန်-based ဘဏ်များပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကမ်းလွန်လုံခြုံ-ဆိပ်များတွင်ဘဏ်ရန်ပုံငွေများကိုတက် coughs အထိအကြောင်းပြချက်နိုင်ငံခြားဘဏ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအကိုင်းအခက်ဒဏ်ရိုက်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသင့်အိမ်နိုင်ငံတွင်အခက်များရှိသည်ပါဘူးတဲ့ဘဏ်ကို အသုံးပြု. များအတွက်ကြီးမားသောအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုကပိုင်ဆိုင်, အလှည့်၌, ကြောင်းကိုတစ်ဦး LLC တှငျကငျြးပခဲ့ရှိခြင်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်မှလုံခြုံမှုအရှိဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်ကမ်းလွန်ဘဏ်သင့်ဒေသခံတရားစီရင်ရေး၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်အခက်ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးသေချာအောင်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများ၌ဤပေါင်းစပ်ရန်လိုဥပဒေရေးရာတိုက်ခိုက်မှု၏သားကောင်များနေသောချမ်းသာကြွယ်ဝစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူများအလုံးအရင်းများအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုပေးထားသည်ဟုသိရသည်။
သငျသညျဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်လိုသောသို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းသင်သည်သင်၏မိသားစုများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုသလား? On-နေထိုင်သူတစ်ဦးအဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့အစဉ်အဆက် \_ သွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲကေမန်ကျွန်းစုများတွင်အများဆုံးဘဏ်များမှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, တကဘဏ်လုပ်ငန်းအကောင့်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်စတင်မီ LLC ကို set up ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆပါပဲ။ တစ်ခုက LLC သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အကြွေးများကဖမ်းဆီးရမိမှသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကှယျဖို့, သင်တို့အဘို့ကာကွယ်မှုတစ်ခုအပိုအလွှာအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်း Cayman LLC ကို set up နိုင်ပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့်တစ်ဦးကေမန်အကောင့် LLC သည်ထူထောင်ရန်အသုံးအများဆုံးသောအရပ်နေးဗစ်၏ကာရစ်ဘီယံကျွန်း၌တည်ရှိ၏။ ဒါကြောင့်သင်တဦးတည်းတိုင်းပြည်အတွက်ကုမ္ပဏီထူထောင်နှင့်အခြားအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။ ဒါကလုံခြုံရေးတစ်ဦးအပိုဆောင်းအလွှာဖန်တီးနှစ်ဦးစလုံးနှင့်သင့်ရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ချက်မှကိုက်ညီမှာအကောင်းဆုံးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အများအပြားကစာရွက်စာတမ်းများပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ဖွင့်တင်ထားရန်လိုအပ်နေပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ဖွင့်ဖို့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းများ၏အချို့လျှောက်လွှာကိုယ်တိုင်ကအပြင်, ဝိသေသလက္ခဏာစိစစ်အတည်ပြုစာရွက်စာတမ်းများ, တစ်ဦးကလက်ရှိရေခြားမြေခြားလိပ်စာ, အကောင့်သို့သွားရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်လက်ရှိဘဏ်အနေဖြင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းကိုကိုးကားအက္ခရာများဖြစ်ကြသည်။ အကောင့်မျိုးစုံလူတို့အဘို့ created ခံရလျှင်, တဦးတည်းအားလုံးပါတီများထံမှရည်ညွှန်းအက္ခရာများနှင့်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများပါဝင်ရမည်။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့် setting ပြီးနောက်အချို့သောဘဏ်များတစ်ဦးစစ်ဆေးနေအကောင့်ကိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပေမယ့်ငွေစုအကောင့်များနှင့်တစ်ဦးဒက်ဘစ်ကဒ်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ အများစုမှာဘဏ်များလွယ်ကူသော-to-ကိုအသုံးပြုဖို့အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်ပလက်ဖောင်းပူဇော်လုပ်ပါ။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများအရှိဆုံးကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လူသိများတဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဘဏ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်ဘဏ်ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုမီကစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Cayman အတွက်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်လိုသောမည်သည့်ဘဏ်သို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုကုမ္ပဏီပထမဦးဆုံးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းသို့မဟုတ်ပြည်ပမှာဖြစ်စေ, ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်နေပါသည်။
တစ်ဦးကေမန်ကျွန်းများဘဏ်တစ်ကော်ပိုရိတ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အချို့သောစာရွက်စာတမ်းများရှိပါတယ်။ ဤအချက်အလက်အချို့သည်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်စာရွက်စာတမ်း, တစ်ဦးကလက်ရှိဘဏ်ထဲကနေကိုးကား, အသီးအသီးအကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်အကောင့်များအတွက်အကြောင်းပြချက်အသေးစိတ်စာတစ်စောင်တစ်ဦးကလက်ရှိလိပ်စာအထောက်အထားနှင့်ထို့ထက် ပို. များအတွက်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများပါဝင်သည်။ အားလုံးဒါရိုက်တာများ, အဖွဲ့ဝင်များနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့်အားလုံးကိုလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ထက်ပိုမို 10% ကိုပိုင်ဆိုင်သူကိုရှယ်ယာရှင်များလည်းဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကိုးကားလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ဖို့အနည်းဆုံးသိုက် $ 2,500 KYD ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ, ဗြိတိန်ပေါင်သို့မဟုတ်အခြားဦးစားပေးငွေကြေးအတွက်ညီမျှသော။ နိမ့်ဆုံးထည့်သွင်းငွေပမာဏကိုအခြိနျမှနျမှအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။
မဆိုတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အိမ်ကနိုင်ငံ၏အခွန်နှင့်အခြားဥပဒေများလိုက်နာမှု၌ကျန်အဖြစ်အမြတ်ထုတ်ကနေခိုလှုံ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစောင့်ရှောက်ရန်မိမိတို့၏အရေးကိစ္စစီစဉ်ဖို့ခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါကေမန်ကျွန်းစုများတွင်တစ်ဦးကဘဏ်အကောင့်ကဒီအကြံပေးချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူမယ့်ကောင်းသောလမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အိတ်ကပ်တန်းစီဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာဒီဂရီနှင့်အတူအချို့သောဟော့ရှော့အဲဒီမှာအထဲကဆွဲထားသင့် hard-ရရှိခဲ့သည်စည်းစိမ်ကိုစွန့်ခွာ၏အလားအလာကိုလက်မခံပါနဲ့။ သင်က Cayman ၌သင်တို့၏ကမ်းလွန်အကောင့်ထူထောင်အပေါ်နောက်ထပ်အကူအညီကိုရှာနှင့်တစ်ဦးပိုမိုလုံခြုံအနာဂတျအတှကျသင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်သင့်ကုမ္ပဏီကိုထူထောင်ရန်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်အရေအတွက်ကိုသို့မဟုတ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပုံစံကိုသုံးနိုင်သည်။